5 Dugsiyada Injineerinka ee ugu Fiican Texas oo leh Deeqo waxbarasho 2022
January 23, 2022 Adaeze Nwachukwu
5 Dugsiyada Injineerinka ugu Fiican Texas oo leh Deeqo waxbarasho
Texas waxay hoy u tahay qaar ka mid ah iskuulada injineeriyada ugu fiican adduunka, maqaalkani wuxuu bixiyaa tafaasiil dhamaystiran oo ku saabsan 5ta iskuul ee injineerinka ugu wanaagsan Texas oo ay weheliso deeqaha waxbarasho ee dugsigu bixiyo.
Waa maxay Injineerku?
Maxay yihiin magaalooyinka ugu caansan ee leh iskuulada injineernimada ee Texas?
Koorsooyinka injineernimada caanka ah
Tobanka Dugsi ee ugu sareeya injineernimada Texas.
Iskuulada Sare ee 5 injineernimada ee Texas oo leh deeq waxbarasho
Jaamacadda Texas ee Austin
Xarunta A&M ee Texas
Jaamacadda Texas ee Dallas
Faahfaahin ku saabsan 5 Dugsiyada Injineerinka ugu Fiican Texas oo ay la socdaan deeqo waxbarasho
Jaamacadda A&M ee Texas
Texas waxay hoy u tahay qaar ka mid ah Iskuulada injineernimada ugu fiican dunida, Maqaalkani wuxuu siinayaa faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan 5 iskuulada injineernimada ugu fiican ee Texas oo ay weheliso deeqaha waxbarasho ee dugsi kasta bixiyo.
Injineeriyadu waa midda aasaaska u ah guulaha uu gaaro ninka taas oo ay ugu wacan tahay laanta sayniska inbadan oo laqabtay, waxbadan oo wax ku ool ah ayaa laqabtay jawaabo badana waa la helay.
Marka la eego sida ay anshaxdani muhiim u tahay, waxay noqotay barxad weyn oo wax lagu barto ku dhowaad jaamacad kasta iyo kulliyado badan oo ardayuna waxay ku taamayaan inay noqdaan injineero buuxa si ay iyaguna wax ugu biiriyaan qaab kasta oo ay awoodaan.
Injineeriyadu waa adeegsiga mabaadi'da sayniska si loo qaabeeyo loona dhiso mashiinno, qaab-dhismeedyo iyo waxyaabo kale oo badan oo ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn tuneellada, waddooyinka, gawaarida iyo dhismayaasha. Injineernimada waxay aragtaa in kheyraadka dabiiciga loo rogay macna u leh aadanaha.
Injineeradu waxay raacaan isku xigxiga xalinta dhibaatooyinka, isku xigxiga noocan oo kale ah waxaa ka mid noqon kara qorsheynta, horumarinta, tijaabinta, rakibida iyo dayactirka mashiinada kala duwan ee ay soo saaraan shaqadooda iyo mabaadii'dooda adag.
Waxaa jira sheeko guud oo ah in injineerada oo dhami ay yihiin xisaabiyeyaal xisaabtamaya awooddooda ay ku qiyaasi karaan mashiin maskaxdooda ku jira oo ay miro dhal u keenaan.
Iskuulada injineernimada ee Texas aad ayay u tiro badan yihiin waana ku filan yihiin in la yiraahdo markii la tixgelinayo jaamacadda si loo dalbado, waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo cilmi-baaris muhiim ah oo ku saabsan kuwa leh astaamaha iyo awoodaha loo baahan yahay si loogu qalmo mid ka mid ah xirfad-yaqaannada injineernimada . Qaar badan oo ka mid ah kulleejooyinkan ayaa ah kuwa ku xeel dheer cilmi baarista iyo hal-abuurnimada weyn.
Magaalooyinka ugu caansan ee leh iskuulada injineernimada waxaa ka mid ah San Antonio, Houston, Dallas, Austin iyo El Paso.
Maanta, waxaa jira dhinacyo badan oo injineernimada ah oo qofku ka weynaan karo. Qaar ka mid ah shahaadooyinka injineernimada waxay bixiyaan lacag ka sarreysa kuwa kale sababtoo ah qanacsanaanta iyo dalabkooda caanka ah.
Tiro badan oo ka mid ah waxaa ka mid ah injineernimada kombiyuutarka, injineernimada batroolka, injineernimada badda, injineernimada aerospace, injineernimada kiimikada, injineernimada makaanikada, injineernimada madaniga ah iyo injineero kale oo aad u tiro badan.
Waxaa jira jaamacado qaar oo ugufiican maadooyinka injineernimada qaarkood sida kombiyuutarka iyo injineernimada farsamada iyo korontada, waa wax fiican inaan si buuxda u cusbooneysiino qalab kaa caawin kara inaad ogaato iskuulada ugu fiican ee bixiya farsamooyinka injineernimada;
9 jaamacadaha injineernimada farsamada sare ee Kanada
13 iskuulada injineernimada kombiyuutarka ugu fiican adduunka
15 iskuulada injineernimada korantada adduunka ugu fiican
Kulliyadda Koonfurta ee Methodist
Jaamacadda Texas Tech
Jaamacadda Waqooyiga Texas
Tobanka dugsi ee kor ku xusan waxay sameeyaan liis dhameystiran oo ah tobanka dugsi ee ugu sareeya injineernimada Texas laakiin dardaaranka toosan darteed, waxaan go'aansanay inaan qodobkaan kusoo koobo shanta dugsi ee ugu sareeya; waxay ku qoran yihiin hoos.
Tani waa jaamacad gaar loo leeyahay oo dhexdhexaad ah oo ku taal Texas. Waxay ku fadhiisataa bartamaha magaalada Houston oo ku taal xerada 300-hektar geed-saf ah oo aad ugu dhow xarunta caafimaadka ee Texas iyo Houston Museum District. Waa kulleej injineer afar sano ah oo ku yaal Houston, Texas.
Iskuulku wuxuu leeyahay heer aqbalaad ah oo ku saabsan 11%. Waxbaridda ardayda waxay ku saabsan tahay $ 23,202 laakiin ardayda aan awoodin inay la qabsadaan oo u qalma deeqda waxbarasho way xaadiri karaan. Khidmadda dalabku waa $ 75 oo had iyo jeer waxay dhammaan doontaa Janaayo 1 sannad kasta.
Ardayda la filayo waxaa lagula talinayaa inay codsadaan waqti hore si fursad wanaagsan ay ugu helaan iskuulka. Qiyaasta aqbalida waa 11%. Iskuulku wuxuu aqbalaa codsi caadi ah sanadkiiba iyo 69% ardayda waxay helaan kaalmo dhaqaale / deeq / deeq waxbarasho sanadkiiba. Celcelis ahaan wadarta guud ee kaalmada la bixiyo sanad walba waa $ 39,956 halka 93% ardayda ay isku raacsan yihiin in macallimiintu ay dadaalka ugu badan geliyaan sidii ay wax u baran lahaayeen ardaydooda.
Si laguu oggolaado injineernimo kasta oo ka tirsan Jaamacadda Rice, dhibcaha aasaasiga ah ee loo baahan yahay ee Sat wuxuu u dhexeeyaa 1450-1560. 100% ardayda cusub waxay ku nool yihiin Campus. Waxa ka soocaya dugsigan intiisa kale dugsiyada injineernimada ee Texas waa qaabkooda gaarka ah ee muxaadarooyinka iyo barashada.
Fasallada ayaa riixaya ardayda waxayna ka hor imaanayaan dabeecad xumo kasta oo laga yaabo in ardaygu qabo. Ardayda iyo macallimiintu waxay si isku mid ah u wada shaqeeyaan oo ay la yimaadaan hal-abuurnimo waxtar u leh horumarka aadanaha. Heerka qalin-jabinta waa 95% iyo 92% ee ardayda waxay shaqo helaan laba sano gudahood qalin-jabinta.
Faahfaahinta deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Rice;
Jaamacadda Rice waxay tirtiraysaa caqabadaha dhaqaale ee dhanka waxbarashada ah iyadoo siineysa tiro ballaaran oo sanadle ah deeqaha waxbarasho ee ardayda inay codsadaan oo ay ku gaaraan shaqadooda Rice iyaga oo aan ka walwalin dhaqaalaha maadaama deeqda waxbarasho ay daryeeli doonto dhammaan maalgelinta.
Deeqdani waxay u furan tahay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba qayb kasta oo daraasad ah oo ku saabsan dhammaan heerarka waxbarasho xitaa ardayda cusub yaa heli kara deeqo waxbarasho oo ku saleysan waxqabadkooda tacliimeed ee wanaagsan, waxaa sidoo kale loo yaqaanaa deeq waxbarasho ku saleysan.
Tani waa mid ka mid ah 25 jaamacadaha injineernimada ugu fiican Ameerika, waxay ka dhigeysaa tan labaad ee ugu wanaagsan Texas. Waxaa lagu qoraa Austin Texas. Jaamacadu waxay si ficil ah u bixisaa ilo kasta oo looga baahan yahay horumarka dugsiga, raaxada iyo isticmaalka ugu badan ee ardayda.
Waa iskuul weyn oo leh qiyaastii 38,097 isqorista shahaadada koowaad. Gelitaanka iskuulku waa mid si cadaalad ah u tartamaya maadaama iskuulku leeyahay aqbalitaan dhan 39%. Qalinjabiyeyaasha qalin jabinta ee Jaamacadda ayaa sii socota kadib si ay u kasbadaan mushahar bilow ah oo ku saabsan $ 46,000 waxbarashadooda kadib.
Jaamacadda Texas ee Austin waxaa sidoo kale caan ku ah inay haysato nolol ardaynimo aad ugu habboon, sidoo kale waa sideed ka mid ah 668 jaamacadaha guud ee Mareykanka. Khidmadda dalabka waa $ 75 ugu dambayntiina codsigu waa sannad walba Diseembar 1.
Dhibcaha SAT ee u dhexeeya 1230-1480 ayaa looga baahan yahay gelitaanka dugsiga sharafta leh, halka inta u dhexeysa Sharcigu yahay 27-33.
Guddiga Jaamacadda wuxuu fahamsan yahay in tiro wanaagsan oo ardayda ah aysan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada iyo khidmadaha kale si wax ku ool ah, sidaa darteed tiro wanaagsan oo ardayda ah oo qiyaastii ah 65% ay ku nool yihiin deeq waxbarasho iyo gargaar lacageed. Jaamacadu waa tan koowaad ee jaamacadaha bulshada ee Texas.
Jaamacadda Texas, Austin Deeqaha Faahfaahinta;
Si loogu oggolaado ardayda ka soo jeeda meel kasta inay ku raaxeystaan ​​waxbarashada heer caalami ah ee Jaamacadda Texas, taxane ah deeqaha waxbarasho waxaa sanad walba la siiyaa ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama gudaha ama dibaddaba waad dalban kartaa deeqdan waxbarasho.
Deeqdani waxay mari doontaa waddo dheer oo lagu maalgeliyo dhammaan ama kalabar khidmadaha waxbarashadaada.
Tani waa jaamacad dadweyne oo aad loo qiimeeyo oo ku taal College Station Texas, oo ah jaamacad aad u ballaaran, oo in ka badan 47,399 isqorista. Asal ahaan waa mid ka mid ah iskuulada ugu fiican Texas iyo adduunka ku xeeran.
Waa iskuul tartan badan oo leh heerka aqbalaadda ee ku saabsan 68% waxaana hadda u muuqday lambarka labaad sida ugu sareysa jaamacadaha dadweynaha ee Texas. Codsiga marwalba waa Diseembar 1 oo khidmadda dalabka waa $ 75, waa wax aad loogula talin karo ardayda mustaqbalka inay ku soo diraan arjiga goor hore si ay fursad ugu helaan.
Mid ka mid ah shuruudaha aasaasiga ah ee helitaanka gelitaanka dugsiga waa dhibcaha SAT oo u dhexeeya 1170-1380 iyo dhibcaha ACT ee doorbidaya 25-31.
76% ardayda waxay kahelaan caawinaad maaliyadeed jaamacada sanad walbana qiyaastii $ 9,597 waxaa lagubixiyaa deeqo, deeq waxbarasho iyo kaalmo dhaqaale. Texas A&M waxay ka dhex muuqataa iskuulada kale ee ku yaal Texas boqolkiiba ardayda la siiyo kaalmo si ay u helaan tayada waxbarasho ee ay rabaan laakiin xoogaa xayiran. Ardayda waxaa lasiiyay fursad ay si xoogan ugu baaraan kuna soo bandhigaan fikradahooda si dhab ah.
Faahfaahinta Deeqaha A&M ee Texas;
Dugsigani wuxuu leeyahay waax gaar ah oo ka shaqeysa dhammaan ardayda deeqaha waxbarasho iyo maalgelinta maaliyadeed. Waxaa jira deeqo waxbarasho oo kaladuwan oo ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay codsan karaan laakiin deeqaha waxbarasho waxay ku saleysan yihiin waxqabadka akadeemiyadeed ee ardayga, oo ah inuu fiicnaado, iyo ardayda leh arrimaha dhaqaalaha.
Qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ayaa qayb ahaan iyo si buuxda loo maalgeliyaa laakiin mid kastoo lagu siiyo ayaa kaa caawin doona maalgelintaada waxbarasho waxaana la siiyaa sanadkiiba.
Kani waa Jaamacad Masiixi ah. Waxay ku jirtaa liistada seddexaad ee Jaamacadaha Masiixiyiinta ugu wanaagsan Ameerika. Waa jaamacad aad loo qiimeeyo oo ku taal Jaamacadda Park ee ku taal Dallas Fort Worth Area.
Waxaa loo gudbin karaa jaamacad dhexdhexaad ah oo qiyaastii ah 6,273. Gelitaanka iskuulku xoogaa waa tartan maadaama ay helayaan codsiyo badan. Qalinjabiyeyaasha Koonfurta Methodistku waxay aadaan mushahar bilow ah $ 54,300. Xilliga kama dambaysta ah ee codsigu waa Janaayo 15 iyada oo khidmadda dalabka ee $ 60.
SAT loo baahan yahay waxay u dhexeysaa 1280-1460 iyo dhibcaha ACT qiyaastii 29-33. 77% ardayda waxay helaan caawinaad maaliyadeed sanad kasta celcelis ahaan wadarta kaalmada maaliyadeed ee la bixiyo sannad kasta waxay ku saabsan tahay ama mararka qaarkood in ka badan $ 7,535. Qiyaasta ardayda iyo macalimiintu waa 11: 1 iskuulkuna wuxuu wadaa barnaamijyo shahaadada fiidkii ah sidoo kale.
Sida laga soo xigtay ra'yi ururin dhowaan la sameeyay, 89% ardayda waxay ku raacsan yihiin fikradda ah in macallimiintu ay dadaal badan ku bixiyeen barashada fasalladooda. Boqolkiiba ardayda kale ee wanaagsan waxay isku raacsan yihiin inay fududahay in la helo fasalada ay rabaan iyo inay aad ufudud tahay maaraynta culayska shaqada.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan jaamacaddan inay tahay in nidaamka Jaamacaddu aad u wanaagsan yahay, waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican Texas oo leh deeq waxbarasho inkasta oo si gaar loo leeyahay. Aragtidooda ku wajahan shaqada adag iyo adkeysiga waa mid aad uwanaagsan oo xitaa marka laga reebo tayada waxbarashada, ardayda waxaa loo qaabeeyey dabeecad waxaana loola dhaqmaa si gaar ah, qof walba awoodiisa / awoodeeda.
Faahfaahinta Deeqaha Jaamacadeed ee Koonfurta Methodist;
SMU waxay bixisaa waxbarasho heer sare ah waxayna dooneysaa qof kasta oo ku hamiya inuu aado halkaas inuu qeyb ka noqdo waana sababta iskuulku u bixiyo noocyo kala duwan deeqaha waxbarasho ee ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah, dhammaan heerarka waxbarasho, si loo dalbado, loo helo maalgelin loona helo waxbarasho heer caalami ah oo ay u qalmaan.
Deeqaha ayaa la siiyaa sannad kasta ardayda leh waxqabadka akadeemiyadeed ee wanaagsan iyo qodobo kale oo u qalma oo dugsigu dejiyey.
Tani waa seddexaad liiska jaamacadaha dadweynaha ee ugu sareeya Ameerika. Waxaa si heer sare ah looga qiimeeyay guud ahaan Ameerika iyo wixii ka baxsan oo ku yaal I Richardson, Texas oo ku taal Dallas-Fort Worth Area.
Waa hay'ad weyn oo leh qiyaastii 16,691 ardayda jaamacadeed. Ogolaanshaha waa tartan; waxay haystaan ​​heerka gelitaanka ee 69% iyo ardayda qaan-gaarka ah ayaa la sheegay inay aadayaan mushahar bilow ah $ 44,000. 132 ka mid ah kuliyadaha, waa 63rd kuliyadaha waaweyn ee ugufiican Ameerika.
Waxay leedahay kama dambaysta arjiga ee Diseembar oo leh lacag dalab ah $ 50. Qiyaasta dhibcaha ACT waa 25-32 halka heerka dhibcaha SAT ay tahay 1220-1440 iyo bedel ahaan, CGPA dugsiga sare ayaa loo baahan yahay. Wadarta guud ee dadka qaata gargaarka maaliyadeed waxay qiyaastii tahay 77% ardayda celcelis ahaan wadarta gargaarka ah $ 14,566.
In kabadan 75% ardayda ayaa isku raacay in Professor-ku uu sida ugufiican ugusoo dhigo barashada fasaladooda taas oo u suurta galinaysa inay si amaan ah u wataan shaqadooda. Iskuulku waa iskuul aad u fiican, waxay ardayda u diyaariyaan caqabad waxayna ka caawiyaan inay wajahaan nolosha gebi ahaanba tacliintooda iyo adduunyada adduunyada. Waa shanaad liiska 5 dugsi ee ugu fiican injineernimada Texas oo leh deeq waxbarasho.
Jaamacadda Texas, Dallas Deeqaha Faahfaahinta;
UT Dallas ayaa bixisa maalgalinta deeqda waxbarasho ee sanadlaha ah ardayda ujeedadoodu tahay inay halkaas wax ku bartaan, deeqda waxbarasho ayaa laga yaabaa inay noqoto mid si buuxda loo maalgeliyo ama qayb ahaan la maalgeliyo laakiin waxay ka caawinayaan inay wax u qabtaan ardayda. Tani waxay ka dhigan tahay inaad wax ku baran doontid UT Dallas adigoon ka welwelin arrimahaaga dhaqaale.
Deeqaha ayaa loo heli karaa codsi loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee doonaya inay wax ku bartaan.
Halkaas waxaad ku haysataa faahfaahin buuxda oo ku saabsan 5 iskuulada injineernimada ugu fiican Texas iyaga oo wata macluumaadkooda deeqaha waxbarasho.
Ku bilow xirfaddaada injineernimada mid ka mid ah kuwan 15 jaamacadaha injineernimada ugu fiican adduunka dugsiyadan waa kuwo caalami ah oo la aqoonsan yahay waxayna hubinayaan inay qaabeeyaan awoodaada xirfadaha injineernimada guuleysta.
Dugsiyada Injineerinka ugu Fiican TexasIskuulada injineernimada wanaagsan ee Texas oo leh deeq waxbarashoDugsiyada Injineeriyada lagula taliyay ee TexasIskuulada Iskuulada Sare ee Teknoolajiyada
Previous Post:6 Faa'iidooyinka Helitaanka La -taliyaha Kulliyadda si uu uga gudbo Imtixaanka Ogolaanshaha
Post Next:Top 10 Barnaamijyada PhD oo si buuxda loo maalgeliyey oo leh Xiriirada Codsiga
June 2, 2020 at 8: 07 pm